Ku saabsan Dugsiga Hoose ee Deephaven | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiga Hoose ee Deephaven: Waa meel wanaagsan oo wax lagu barto.
Shaqaalaha, ardayda iyo waalidiinta waxay kawada shaqeeyaan Iskuulka Hoose ee Deephaven si loo abuuro iskaashi xagga waxbarashada ah. Dhisida iskaashi xoogan oo guriga-dugsiga ah ayaa fure muhiim u ah guusha ardayda. Macallimiintu waxay soo dhaweynayaan fikradda ah hagaajinta joogtada ah waxayna ka shaqeynayaan sidii loogu dari lahaa hababka ugu fiican waxbarashadeena.
Shaqaalaheennu waxay kordhin doonaan waxqabadka ardayda iyagoo:
Kala-saaridda xeeladaha waxbaridda ee xisaabta, akhriska iyo qorista.
Isuduwidda K-5 ee barashada cilmiga.
Abuuritaanka xiriiro taageeraya iyadoo la adeegsanayo DARYEELKA, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo naxariista.
Hagaajinta aqoonta akhriska iyo aqoonta iyo farsamada.
Hadafyadeena waxaa loo abuuray si loo hubiyo inaan la kulanno baahida waxbarasho iyo bulsho ee ardayda.
Waalidiintu waa lamaanayaal qiimo ku leh Dugsiga Hoose ee Deephaven, iyagoo door muhiim ah ka ciyaara guriga iyo dugsiga. Waxaan nasiib u helnay inaan helno beel la wadaagta waqtigooda iyo kartidooda ardaydeena. Waxaan ku dhiiri galineynaa waalidiinta oo dhan inay kaqeyb galaan dugsigeena qaab ku haboon waqtigooda kuna darsadaan hibadahooda.
Dhiirrigalinta Barashada Ardayda
Deephaven waxay kor uqaaday barashada ardayda dhowr siyaabood oo ka baxsan manhajka degmadayada. Awood ahaan iskuul ahaan waxaa ka mid ah barnaamijyo badan oo dheeri ah oo taageera waxbarashada ardayda. Barnaamijyadan waxaa ka mid ah:
Ardayda dhigata fasalka 2aad ilaa 5aad waxay qoraan sheekooyin ka baxsan maalinta iskuulka oo waxay ku helaan buugooda la daabacay munaasabad lagu aqoonsado dabaaldega Qorayaasha bil kasta.
Dabaaldega Qoraaga 'Excellence' (ACE)
ACE waa barnaamij la siiyo ardayda dhigata fasalka 5-aad. Ardayda kaqeyb galeysa waxay la kulmaan lataliyeyaal qaangaar ah iskuulka kadib waxayna la galaan shirar todobaadle ah mudo shan bilood ah. Waxay raacaan hab talaabo-tallaabo ah oo loogu talagalay qorista sheeko dhererkeedu dhan yahay. Ardaydu waxay helayaan nuqul daabacan oo buugooda ah nuqul labaadna waxaa la dhigayaa xarunteena warfaafinta ee ardayda dugsigeena si ay u eegaan waxna u akhriyaan.
Hogaaminta ardayda waxay u furantahay dhamaan ardayda fasalada 4aad iyo 5aad. Waxaan aaminsanahay horumarinta xirfadaha hogaaminta ee ardayda inay tahay mid lama huraan ah oo aan u abuurnay barnaamijka dugsiga kadib kaas oo ardayda baraya xirfadaha hogaamineed ee gaarka ah una oggolaanaysa inay ku tababaraan iyaga oo u maraya mashaariicda waxbarista adeegga.
Teknolojiyada oo ah aalad wax lagu barto
Hogaamiyaha tiknoolajiyadda qaran ahaan la aqoonsan yahay, Deephaven wuxuu ahaa dugsigii ugu horreeyay ee degmadeena tijaabiya Smart Boards 2002-dii waxaanna tijaabinay in ka badan 50 Ipad loo adeegsado ujeeddooyin waxbarid sanadkii 2011. Waxaan soo saarnay casharo aasaasi ah iyo kuwa dhexe ah oo taageeraya manhajkeenna la qaatay. Intaas waxaa sii dheer, adeegsiga laptop-yada fasalka dhexdiisa, tikniyoolajiyadda Guddiga Sare, iyo nidaamyada dhawaqa ee fasalka ayaa door muhiim ah ka ciyaara dardargelinta waxbarashada ardayda.
Akhriska iyo Xisaabta, waxaan ku aqoonsanaa heerka aqrinta ee arday kasta waxaanna u adeegsanaa akhristayaasha la siman si ay ugu bartaan ardayda isticmaalaya Akhriska Hagaha. Ardaydu waxay ku hawlan yihiin 70 daqiiqo oo ah barashada xisaabta maalin kasta waxayna isticmaalaan Xisaabta 'Rocket Math' si loo hubiyo inay aqoon u leeyihiin xaqiiqooyinka xisaabta. Dhacdooyinka sida Bisha Xisaabta iyo Xisaabta Madness waxay dhiirrigelisaa xiisaha iyo barashada xisaabta.
Sayniska, Teknolojiyada, Injineerinka iyo Xisaabta (STEM)
Sayniska, waxaan dhawaan abuurnay iskaashi aan la leenahay Crane Engineering si aan ugu taageerno STEM dugsigeena.
Tonka waa manhajkeena barnaamijyada kombiyuutarka K-5 kaas oo ardayda oo dhan ku baraya luqadda tikniyoolajiyadda, caqliga iyo xallinta dhibaatooyinka.
Waxaan qabannaa sanadle ah higaad higaad fasal 5aad iyo shinni juqraafiyeed si aan u dhiirrigelinno barasho dheeraad ah aag kasta.
Khasaaraha Barashada Xagaaga
Waxaan u abuurnay Maamulaha Caqabada xagaaga si aan ugu dhiirigelino waalidiinta inay taageeraan caruurtooda xagaaga anaga oo la soconayna shaqadooda xaga aqriska, xisaabta iyo qorista.